>Daw Suu’s will? | MoeMaKa Burmese News & Media
>Burmese Community in Phoenix host Charity &amp; Awareness Drive for Burma
>Daw Suu’s will?
“ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ သေတမ်းစာ” အင်တာနက်တွင် ပျံ့နှံ့နေ
နိုဝင်ဘာ ၁၃၊ ၂ဝဝ၉
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရေးသားသည်ဟု လူတချို့က ယူဆနေသော သေတမ်းစာ တစောင်သည် ကဗျာပုံစံဖြင့် မြန်မာပြည်သားတို့၏ ဘလော့ဂ်များ၊ အပြန်အလှန် ပေးပို့ကြသည့် အီးမေးလ်များတွင် ရောက်ရှိနေသည်။
ထိုကဗျာရေးသားသူမှာ ဘလော်ဂါ မသဒ္ဓါဖြစ်ပြီး သူက သူ၏ဘလော့ဂ်တွင် တင်ရန် စိတ်ကူးယဉ် ရေးဖွဲ့ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ၂၀၀၉ သြဂုတ်လ ၂၇ ရက်စွဲဖြင့် သူ၏ ဘလော့ဂ် http://thadar.blogspot.com/2009/08/blog-post_26.html တွင် တင်ထားသည့် ထိုကဗျာ၏ ခေါင်းစဉ်မှာ “ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ သေတမ်းစာ” ဖြစ်သည်။
သို့သော်လည်း ကဗျာကို လက်ဆင့်ကမ်းသူတချို့က ကလောင်အမည်၊ ကဗျာအောက်ခြေရှိ ရှင်းလင်းချက်တို့ကို ဖျက်ပြီး ကူးယူ ဖြန့်ချိကြသောကြောင့် ပို၍ အငြင်းပွားဖွယ် ဖြစ်နေသည်။
တချို့က ထိုကဗျာသည် မည်သူရေးပြီး မည်သို့ အင်တာနက်တွင် ပျံ့နေကြောင်း သိလိုကြသည်။
ကဗျာ ဖန်တီးသူကမူ ထိုကဗျာနှင့် ပတ်သက်ပြီး ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ထုတ်ဖော်ထားကြောင်း တွေ့ရသည်။
“တကယ်လို့ များ တနေ့ နေ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သေလွန်ပြီးတဲ့ အခါ.. သူရဲ့ ရင်ထဲမှာ.. ဘာဆန္ဒတွေ ရှိပါ့မလဲ.. စဉ်းစားပြီး သရုပ်ဖော်ကြည့်ပါတယ်။ မှားရင် ခွင့်လွှတ်ပါ” ဟု မသဒ္ဓါက ကဗျာရေးရခြင်း အကြောင်းရင်းကို ကဗျာ၏ အောက်ခြေတွင် ဖော်ပြထားသည်။
မသဒ္ဓါက ကဗျာ၊ ဆောင်းပါး၊ သရော်စာများကို ရေးသားပြီး သူ၏ ဘလော့ဂ်တွင် ဖော်ပြလေ့ရှိသူ ဖြစ်သည်။
“ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ သေတမ်းစာ” ကဗျာကို ကလောင်အမည်ဖြုတ်ပြီး yaungzinnyein.blogspot.com chochoaung.blogspot.com နှင့် saisainaylinn.blogspot.com တို့တွင် ဖော်ပြထားသည်။
http://burmadigest.info/2009/11/02/the-will-of-daw-aung-san-suu-kyi/ တွင်မူ အင်္ဂလိပ် မြန်မာ နှစ်ဘာသာဖြင့် တွေ့ရပြန်သည်။
အောက်ပါ ဘလော့ဂ်များတွင်လည်း ကဗျာကို ကလောင်ရှင်၏ အမည်နှင့်တကွ ပြန်လည် ဖော်ပြထားကြသည်။